YBY-033 Tummy Tuck & Lipo Foam Ab board na-egbochi mbufụt + njide mmiri.
Akụkụ ngwugwu: 13 x 12 x 0.7 inch;6.4 ounces
Ngalaba: Ụmụ nwanyị
Ọ bụrụ na ị na-eme usoro ịwa ahụ n'oge na-adịbeghị anya dị mkpa iji nọgide na-enwe nrụgide n'akụkụ afọ gị iji gbochie njigide mmiri ma ọ bụghị ya, ọ ga-emepụta mbufụt yana ahụ erughị ala na mpaghara ala / elu ma mee ka ahụ gị kwụsịlata. oge mgbake.
· Nweta ahụike & arụpụta ngwa ngwa mgbake mgbe usoro ọ bụla ịchọ mma afọ na-etinye nrụgide na idobe ya n'akụkụ ebe ahụ dị mma maka nsonaazụ kacha mma ka anụ ahụ gị na-arapara n'ahụ gị ọzọ, Ab Board a na-eme ihe niile na-adabara n'ụzọ zuru oke na contour na-enye nkasi obi n'oge. post-arụ ọrụ usoro.
Ọnweghị akara ma ọ bụ mpịachi akpụkpọ: Ihe ikpeazụ ịchọrọ mgbe ị na-agbake site na usoro aesthetic post bụ inwe creases na akpụkpọ gị, bọọdụ fupa anyị nwere akwa akwa dị nro na-enye ya mgbanwe iji gbagọọ ma zere akara akpụkpọ ahụ.
· Nkasi obi: Yiri uwe mkpakọ yana bọọdụ afọ ruo ogologo oge nwere ike ị gaghị ahụ ya nke ọma Ya mere anyị ji were polystyrene na-ekpo ọkụ na-eku ume na nha ụwa.Ọ dị nro n'ebe ahụ ma na-enye nrụgide abdominal dị mma.
· 100% Ọdịmma kacha elu: A na-eji nlezianya mee ihe na-enye anyị post op maka ụmụ nwanyị na ndị inyom na-eji ụkpụrụ dị elu nke Colombia na-ebuga ihe kacha mma na nkasi obi.Anyị na-akwado ngwaahịa anyị na 100% "Hụ ya n'anya ma ọ bụ hapụ ya" ma ọ bụrụ na enwere ihe kpatara na ị nweghị ịhụnanya na bọọdụ Tummy anyị na-eweghachi ya maka nkwụghachi zuru ezu, nye anyị nnwale, ọ nweghị ihe egwu 100% na anyị. mara na ị ga-amasị ya.
Nweta nsonaazụ ị chọrọ, yana Tummy ShaperBoard anyị
✔️Akpụkpọ ahụ na-eme ka ahụ dị jụụ
✔️Na-egbochi njide mmiri
✔️Na-agbagharị akpụkpọ anụ n'azụ azụ
Nke gara aga: Ngwa Lipo Foam Post Surgery Kit: 2 mbadamba ụfụfụ egbugbere ọnụ, 1 Wide Ab board – Liposuction, C-Section, tummy tucks, Brazil Butt Lifts
Osote: YBY 031 Lipo Foams & backboard BBL post ịwa ahụ na-enye ezigbo maka mgbake liposuction 360 kechie mkpuchi.
Ngwa Lipo Foam Post Surgery Kit: bọọdụ ụfụfụ egbugbere ọnụ 2,...
Lipo Ab Board Post Surgery Liposuction BBL Foam...